Munaasabad lagu xusayay Maalinta Haweenka ee 8-da Maarso oo maanta lagu qabtay degmada Jowhar (Sawirro) | Somaale.com
Munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay Maalinta Haweenka Aduunka ee 8-da Maarso ayaa maanta lagu qabtay Magaalada Jowhar ee xarunta Gobolka Shabellaha dhexe, iyadoo lagu soo bandhigay halku dhigyo kala duwan oo lagu muujinayay tacdiyada haweenka loo geysto iyo doorka Haweenka ku leeyihiin bulshada dhexdeeda.
Munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay Hey’adda Wada hadalka Bulshada ee CCD ayaa waxaa ka qeyb galay Mas’uuliyiinta ugu sareysa Maamulka Gobolka Shabellaha dhexe oo uu ugu horeeyay Gudoomiyaha Gobolka Eng. Cabdi Jiinow Calasow, Gudoomiye kuxigeenka ee dhinaca Maaliyada Cali Ciiley, Taliyaha Nabadsugida Gobolka, Gudoomiyaha Maamulka degmada Jowhar Maxamed Amiin, Gudoomiyaha Haweenka ee Gobolka Shabellaha Dhexe Sacdiyo Burus iyo ururka Haweenka degmada Jowhar.
Ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha Dhexe Eng. Cabdi Jiinow Calasow oo ugu horeyn u hambalyeeyay haweenka Soomaaliyeed maalinta 8-da Maarso, isagoo sheegay in Haweenka ay udub dhexaad u yihiin Bulshada qeybaheeda kala duwan.
“Ha Guuleysato 8-da Maarso, Hambalyo ayaa leeyahay, Haweenka Soomaaliyed waxay laf dhabar u yihiin bulshada, waxay ahaayeen kuwo qaranka soo bad baadiyay, bad baadinta reerka iyo caruurtooda, xilli ay raga ku mashquulsanaayeen qaadka iyo qoriga, hadaan aduunka lagu abaal marin waa lagu abaal dhacayaa”ayuu yiri Gudoomiye Cabdi Jiinow Calasow.
Gudoomiye Cabdi Jiinow ayaa sheegay in farqi weyn uu u dhaxeeyo sanadkii la soo dhaafay iyo sanadkan, maadaama gobolka aan laga xusin 8-da Maarso, balse maanta si xor ah iyo si farxad ah ay haweenka iyagoo faraxsan isu soo baxeen, ayna dabaal degayaan sida uu yiri.
“Is bedelka maanta la dareemi karo waa ujeedaan, horumarkan waxaa ka qeyb qaatay haweenka, sanadkii hore markii uu cadawga joogay halkaan ma isu soo bixi karin, maantana idinkoo faraxsan oo xor ah ayaa isu soo baxdeen”ayuu yiri Gudoomiye Eng. Cabdi Jiinow.
Waxaa uu sheegay in Haweenka uu horyaalo dariiq dheer, isla markaana looga baahan yahay inay ka qeyb qaataan adkeynta nabadgelyada, isagoo ugu baaqay hooyooyinka caruurta ay dhaleen ee maskaxda laga qalday inay caqligooda u soo celiyaan, ayna maamulka ku soo wargeliyaan si loo dhaqan celiyo.
“Haweenka waa unuga ugu horeeya ee bulshada, daruuf adag ayay soo mareen xaqooda ma helin, waxaan balan qaadeynaa inaan soo celino xuquuqdii iyo karaamadii ay haweenka lahaayeen, waxay qeyb ka noqon doonaan xafiisyada maamulka, in marka la gaaro doorashada la siiyo qeybtii ay maamulka ku lahaayeen”ayuu mar kale yiri Gudoomiye Cabdi Jiinow.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale xusay in amniga uu yahay udub dhexaadka nolosha, taasoo uu tilmaamay inay siinayaan muhiimada koowaad, labaad iyo 3aad, isagoo ka dhawaajiyay in looga baahan yahay inay qeyb lixaad leh ka qaataan, ayna guryahooda ku heysan kuwa nabada diidan.
Sidoo kale Gudoomiyaha degmada Jowhar Maxamed Amiin Cusmaan Caqiil oo munaasabada ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in 8-da maarso ay tahay maalin ku weyn haweenka Soomaaliyed, waxaana uu tibaaxay in haweenka ay ka qeyb qaateen xoreyntii dalka.
Maxamed Amiin ayaa sheegay in haweenka ku nool degmada Jowhar inay soo sheegaan cid kasta oo nabada ka soo horjeeda, waxaana uu ka dhawaajiyay in ammaanka uu yahay mid wanaagsa, isagoo u mahadceliyay Hey’adda CCD oo soo qaban qaabisay Munaasabadan.
Gudoomiyaha Qeybta Haweenka ee Hey’adda CCD Sahro Maxamuud Amiin oo iyana ka hadashay munaasabada ayaa ugu hambalyeysay haweenka Soomaaliyed munaasabada 8-da Maarso, iyadoo ka dhawaajisay in Haweenka ay si wanaagsan isgu soo baxeen, isla markaana Hey’adda ay u qabaneyso haweenka degmada Jowhar kulamo is dhex galka bulshada iyo wacyi gelin.
Waxaa kaloo Munaasabada ka hadashay Gudoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Shabellaha Dhexe Sacdiyo Maxamed Burus oo sheegtay in haweenka ay dhexda u xirtaan sidii caruurtooda u wacyi gelin lahaayeen, isla markaana ka qeyb qaataan ammaanka iyo xasiloonida, waxaana ay ku ammaantay hey’adda wada hadalka bulshada in munaasabada 8-da Maarso oo ay soo qaban qaabisay.
Sidoo kale waxaa munaasabad ka hadashay Gudoomiyaha Ururka haweenka degmada Jowhar Xaliimo Maxamed Xaaji Madyan oo sheegtay in Hooyada ugu horeyn laga rabo in caruurteyda ay waxbarashada ku toosiyo, si hadhow aan loo qaldin, laguna koontaroolo waxbarashadiisa, isla markaana aanu bulshada dhibaateyn.
Gudoomiye kuxigeenka Gobolka Shabellaha Dhexe Cali Cusmaan Ibraahim oo gaba gabadii munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in Haweenka soomaaliyed ay marxalado kala duwan soo mareen, isagoo ka dalbaday inay dahabkooda u gadaan sidii nabada looga shaqeyn lahaa, isla markaana maamulka ay si gaar ah ula shaqeeyaan, waxaana uu u mahadceliyay Hey’adda CCD.
Ugu dambeyn Haweenka ka qeyb galay munaasabadan ee 8-da Maarso ayaa ku soo bandhigay halku dhigyo iyo suugaan, waxaana intii munaasabada socotay Kooxda Xidigaha Jowhar ay dhigeen Ruwaayad gaaban oo ka hadleysay tacadiga Haweenka iyo xuquuqda ay leeyihiin, waxaana haweenka oo labisnaa dharka hidaha iyo dhaqanka ay sameeyeen isu soo bax oo ay ku weyneynayeen maalinta 8-da Maarso.
Somali remittances Dahabshil granted reprieve
Xisbiga Gurmadka Qaranka Somaliyeed. Oo looga Dhawaaqay Uk 0